ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको नयाँ शाखा नवलपुरको कावासोतीमा - TV Annapurna
ज्योति विकास बैंक लि. ले नवलपुरको कावासोतीमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । नयाँ शाखाको कावासोती नगरपालिका वडा नं ८ का अध्यक्ष श्री आनन्द गुरङ र बैंकका अध्यक्ष श्री हरि चन्द्र खड्काले एक कार्यक्रमका बिच संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।
हाल बैंकले ८० वटा शाखा कार्यालय तथा २२ वटा एटिएम मार्पmत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ । साथै यसै आर्थिक वर्ष भित्र थप १० वटा नयाँ शाखा तथा थप २७ स्थानमा एटिएम संचालनमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको कम्पनिका सहायक महा प्रबन्धक रामहरि आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
बैंकले हालसम्म १ लाख ५० हजारभन्दा बढि खाताबाट रु. २३ अर्बभन्दा बढि निक्षेप संकलन गरी १० हजारभन्दा बढि ऋणी मार्फत रु. १८ अर्बभन्दा बढि लगानी गर्न सफल भएको छ । बैंकको हालको चुक्तापूँजी रु २ अर्व ५९ करोड कायम रहेको छ । बैकले हाम्रो बिकाश बैंकलाई प्राप्ती गरी एककृत कारोबार चाँडैनै सुरुवात गर्ने तयारीमा रहेको र तत्पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी रु. ३ अरब १० करोड पुग्ने सहायक महा प्रबन्धक आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।